Afrika : Manaraka Akaiky An’i Shina I Inda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2011 6:02 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Português, polski, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Español, Deutsch, Français
Tamin'ny May, tao amin'ny foiben'ny Fiombonambe Afrikana ao Addis-Abeba, Etiopia, no natao ny fihaonana an-tampony faharoa teo amin'i Inda sy Afrika. Ilay Fihaoanana an-tampony dia tokony ho tonga any amin'ny fanaovan-tsonia antontan-taratasy roa : ny Fanambaran'i Addis-Abeba sy ny Drafi-piaraha-miasa eo amin'i Inda sy Afrika (izay azo jerena ao amin'ny vohikala ofisialin'ny Fiombonambe Afrikana).
Mazava ho azy fa ity fihaonana ity dia niteraka fanehoan-kevitra samihafa teo amin'ny tontolon'ny bilaogy afrikana miteny frantsay mikasika ny hazakazaka ifaninanan'i Shina sy Inda, izay nahatonga ihany koa ny fivoahan'ity lahatsary mananihany ity TheLeadersOfTheWorld tao amin'ny Youtube.
Manmohan Singh, Praiminisitra Indiana, sary avy amin'i Agência Brasil, ampiasàna ny licence Creative Commons (paternité 2.5 Brésil)
Ny journaldutchad.com dia manome ireo tarehi-marika fototra momba ity fihaonana ity:
Hamaky ny tahirin-drakitra araka izany i Inda ary efa mampisangaojy sahady ny milina fanisàna miaraka amin'ny filazàna fampindramam-bola 2400 lavitrisa CFA (5 lavitrisa dolara amerikana) ho an'ny tanibe afrikana, ho an'ny taona telo ho avy. Etsy andaniny, ny Praiminisitra Indiana, Manmohan Singh, izay manana fomba fijery mitovy amin'i Afrika, dia mihevitra koa hanome fanampiana mitentina 336 lavitrisa CFA (700 tapitrisa dolara) miendrika fanomezana ho an'i Afrika.
Patrice Garner ao amin'ny afrique7.com dia manome antsipirihany avy amin'ireo tetikasa vaovao ireo:
Asa no ilaina fa tsy kabary, ary mifanaraka amin'izay fiaraha-miombon'antoka izay dia hisy fananganana ivontoerana iray momba ny teknolojian'ny fifandraisana ao Ghana, ivontoerana iray momba ny fandrindràna ny fanabeazana ao Burundi, ivontoerana iray momba ny varotra ivelany ao Ouganda ary ivontoerana iray momba ny diamondra ao Botswana.
Efa hita mivaingana eo amin'ny fiainana andavanandron'ny Afrikana sahady ireo fampiasam-bola indiana, hoy i Assanatou Baldé ao amin'ny Afrik.com.
Ny iray tena goavana indrindra dia ny Bharti Airtel, orinasa lehibe momba ny fifandraisan-davitra, izay namoaka 10 lavitrisa dolara mba hahazoana ny tsenan'ny finday tany aminà firenena afrikana 15. Ny vondron'orinasa mpanamboatra fiara Tata, hita aminà firenena 11 ao ao Afrika, dia manjaka tokana amin'ny seha-pitateram-bahoaka ao Ouganda sy any amin'ny faritr'i Thiès ao Sénégal.
Fiarabe Tata ao Afrique – Sary: Robin Elaine ao amin'ny Flickr navoaka eo ambany fiarovan'ny licence Creative Commons CC-by
Fifanakalozan-dresaka iray no misokatra ao amin'ny Flamme d'Afrique, les autres voix de l’Afrique (Afon'i Afrika, Ireo feo hafa avy ao Afrika) an'ny Ivontoerana Institut Panos, ka ao i Ousseini Issa no mampitaha ireo fomba fijerin'i Inda sy Shina an'i Afrika:
Ireo fifandraisana ara-barotra sy fifanekem-piaraha-miasa iarahan'i Delhi amin'i Afrika dia miavaka amin'izay ataon'i Shina, amin'ny fidirana an-tsehatra betsaka ataon'ireo orinasa tsy miankina amin'ny ankamaroany, saingy atosiky ny fanjakana any aminy kosa, izay mikatsaka koa ny hipetraka any amin'ny alalan'ny tetika «fusion-acquisition» (fitambarana-fitelemana), sehatra izay anomezan'i Shina vahana kokoa ny varotra mivantana iarahana amin'ny governemanta. Saingy manana ity mampiavaka azy ity koa i Inda, ny fikendrena ny hampivoarana tetika fidirana anatin'ireo fikambanana ara-toekarena isam-paritra toy ny Cedeao sy ny Sadc. […] ho an'ny maro, ny tena lalao izany dia eo amin'ny fomba hametrahana ny kaontinanta ho anaty fifandraisana hafa noho ireo izay voafetra ny fitrandrahana azy nandritra ny taonjato maro, nanaraka ny lalan-jotra Avaratra-Atsimo.
#2 NIBIZI dia manantena vanim-potoana vaovao miaraka amin'io fifanantonana io:
Miaraka amin'io fifanekem-piaraha-miasa io, tokony hisintona lesona ireo mpitarika afrikana ka hiala amin'ny fanaovana kolikoly nambotry ny kaontinanta. Ny kolotsaina momba ny zon'olombelona no tokony handeha alohan'ny zavatra rehetra mba hahafahana misitraka ny tombontsoa avy amin'io fifanatonana io izay handevona ny ady, ny fifanolanana anatiny izay nisakana ny kaontinanta afrikana tsy hiroso tsara.
karl dia mitodika kokoa amin'ny zava-misy iainana, sady manantena no manahy ihany, indrindra ny amin'ny fanagiazana ny tany rehetra azo volena:
Ny fisian'ity vovonana ity dia tokony ho an'i Afrika, fotoana hifampiraharahàna ny amin'ny fomba hiaraha-miasa hitondràna vahaolana ho an'ny olana henjana ara-angovo. Nefa ny tena hatao dia ny hanafoana ny fampanofàna sy ny fivarotana ny tany afrikana, noho ireo mpamokatra misedra fahasahiranana mafy tokoa vao mba afaka mahazo azy ireny ho fandraisany anjara amin'ny fanatràrana ny fahavitantena ara-tsakafo sy hiantohany ny zony hanana toerana honenana.
Ao amin'ny vohikalan'ny RFI, misy lahatsoratra iray momba ny vovonan'i Addis Abeba, izay niteraka fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpamaky ihany koa. Somary henjakenjana izy ireny, ho fanoherana ny ataony hoe “Fahaleovantena ambany fanaraha-maso henjana“(teny avy amin'ny hiran'i Alpha Blondy), izany hoe ilay lasitra fiaraha-miasa Frantsay taty aorian'ny fanjanahana:
Miaraka amin'ny fahatongavan'i INDA sy SHINA eto amin'ny kaontinanta AFRIKANA, dia tena mirehareha tokoa isika, satria izany dia hanampy antsika hanilika amin-kery an'ireo jiolahy imperialista nandroba ny kaontinanta hatramin'ny 1960.[…]
[…] Tsy mahita an'izany hoe Ouattara hanome tsena mampidi-bola be ho an'ny indiana sy ny shinoa izany aho ka hanao izay hahavoa an'i Frantsa. Raha tsy ohatra angaha ka tsy te-hijanona ela eo amin'ny fitondràna izy.
Ny fomba firotsaky ny indiana amin'ny fiaraha-miasa amin'i Afrika dia tena lavitry ny fitiavantena tsy toy ny an'i Frantsa tantanin'i Sarkozy. Manomboka izao ny afrikana dia tokony hanome lamosina ireo firenena manambana vavam-basy azy ary manery azy hanao fitantanana tsy azy akory.
Ireny endrika fiaraha-miasa ireny, izay itsiriritan'ny hafa fatratra tokoa ny otrikarena afrikana (na Eraopa io na ny firenena ao anatin'ny BRIC) dia tsy ho vahaolana maharitra ho an'ny fandrosoan'ny kaontinanta. Ny fifanekem-piaraha-miasa dia tokony hiorina manodidina ny fijery lavitra izay hahafahan'ny afrikana, indray andro any, mandeha kosa mivarotra ‘TATA’ any Inda, Frantsa na SHINA (sariitatra no ataoko io). Miainga amin'ny fanofànana ny tanora izany, ny demaokrasia ary ny politika ara-toekarena sahisahy ho amin'ny Lavitr'Ezaka izay mikendry ny hanafoana ny rafitra ‘tànana mitsotra’ (hataka) nisy teto amin'ity kaontinanta ity.
Ny fihaonana tao Addis Abeba dia fotoana ihany koa ho anà vondrona iray mpively amponga, Rufisque, tanàna iray any atsimo-atsinanan'i Dakar, mba hametrahany ny dian-tànan'ny kolotsaina avy any andrefan'i Afrika, i Etiopia. Ao amin'ny rufisquenews.com, Chérif FAYE nanambàra ny fanasàna voarainy avy amin'ny Masoivohon'i Inda ao Sénégal :
Ny tarika « Kër Gi » an'i Bargny [tokony] hanao fampisehoana mandritra ny seho an-tsehatra iray antsoina hoe « Guur Nduuy » izay midika hoe « tradition léboue ». Ny « Guur Nduuy » dia seho izay mampivoitra endrika vitsivitsin'ny harena tsy hita mason'ny vondrom-piarahamonina léboue.